Xiddig lagu xardhay magaca Trump oo loo codeeyay in la fujiyo | Berberanews.com
Home WARARKA Xiddig lagu xardhay magaca Trump oo loo codeeyay in la fujiyo
Xiddig lagu xardhay magaca Trump oo loo codeeyay in la fujiyo
alka Maraykanka ayaa u codeeyay si aqlabiyad ah in dariiqa xiddigaha ee shirkadda aflaamka ee Hollywood-ka laga fujiyo magaca madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Duqa magaaladan ayaa sharaxaya sababta keentay codeynta “In aad hesho xiddiga caanimada ee Hollywood Walk of Fame waa sharaf weyn, marka uu qofka liidayo dadka laga tirada badanyahay, muhaajiriinta iyo muslimiinta, dadka curyaamiinta ah iyo dumarka, waa in sharaftaas laga xayuubiyaa” ayuu yiri John Duran.
Balse dhibka jira ayaa ah in maamulka dowladda hoose aysan lahayn go’aanka xiddiga meeshaas lagu dhajinayo iyo kan laga fujinayo, waxaana go’aanka leh Rugta Ganacsiga Hollywood, duqa magaaladana wuxuu leeyahay “iyaga ayay u taalaa”.
Waligeed ma aysan dhicin in golaha deegaanka la weeydiisto in xiddig ay ka fujiyaan dariiqa xiddigaha ee Hollywood, halkaas oo lagu dhajiyo magacyada inta badan dadka caanka ah, gaar ahaan aflaamta iyo heesaha sameeya.
Arrinta xiddigan Trump ayaa soo shaax baxay kadib markii nin uu masaar (gudin) la dhacay , islamarkaasna garaafooyin u geystay xiddiga dhulka ku dhegan, kaas oo samayntiisa ay lacag badan tahay.
Waxaa kale oo dhacday in xiddiga lagu buufiyay astaantii naasiyiinta Jarmalka ee swastika loo yaqaano, waxayna taas keentay darbi yar laga dul dhiso xiddigga si loo illaaliyo.
Dariiqan waxa ku yaala 2,600 oo xiddig, celcelis ahaana 2 xiddig ayaa lagu kordhiyaa bil kasta.
Qof kasta ayaa soo jeedin kara in qof jila aflaamta ama heesa magaciisa lagu dhajin karo dariiqa, balse waqti aad u dheer ayay qaadataa inta go’aan laga gaarayo.
Waana in qofka lasoo jeediyay magaciisa uu aqbalo, waana sababtaas tan jilayaasha Julia Roberts, Robert Redford iyo Dustin Hoffman aysan wax xiddig ah ugu lahayd dariiqan.
Sida ku qoran bogga xaruntan, qofka meesha magaciisa lagu dhajinayo waxaa laga rabaa shuruudo kale duwan, waxaa ka mid ah in uu horey u heley abaalmarino, 5 bog oo taariikh nololeedkiisa ah, iyo tan ugu muhiimsan oo ah lacag dhan $400,000.
Ma jirto waligeed qof magaciisa laga fujiyay dariiqan, balse waxaa lasoo jeediyay in Rugta Ganacsiga ay fujiso magacyada Bill Cosby iyo Kevin Spacey oo ay qabsadeen fadeexado la xiriira xad gudubyo dumarka ah.
Rugta ayaa sheegtay in xaruntan ay tahay goob taariikheed, haddii mar xiddig la dhajiyana aanan waligeed laga fujinaynin.
Xiddig Bill Cosby ayaa dhawr jeer la garaafeeyay tan iyo intii ay soo baxday fadeexadda.
Trump ayaa xiddiga heley sanadkii 2007-dii, wuxuuna ku heley hawshii uu agaasimi jiray mudada 20-ka sano ah ee la xiriirtay tartanka quruxda adduunka.
Mise ahan madaxweynaha kaliya ee halkaas xiddigta ku leh, sidoo kale madaxweynihii hore Ronald Reagan ayaa xiddig ku leh halkaas, waxaana la dhajiyay sanadkii 1960-kii, xilligaas oo uu Reagan aflaamta jilli jiray.
Dariiqan xiddigaha waxaa la sameeyay sanadkii 1953-dii, waxaana soo hindisay madaxweynihii rugta ganacsiga Hollywood E M Stuart.
Golaha deegaanka ee magaalada Los Angeles oo degmadan Hollywood ay ku taalo ayaa ansixiyay sanadkii 1956-dii.
Murankii ugu weynaa, uguna horeeyay waxa uu dhacay kadib markii wiil uu dhalay majaajiliistihii caanka ahaa Charlie Chaplin uu dacwad ku furey rugta ganacsiga, isaga oo ku heystay in aabihiis aanan lagu darin magacyada meesha lagu dhajiyay.
Xiddigii ugu horeeyay ee la dhajiyay waxa uu ahaa kan Stanley Kramer, sanadkii 1960-kii.
Xiddiga Charlie Chaplin oo jilli jiray aflaanta juuq la’aanta ah ee majaajilada ayaa ugu dambeyntii la dhajiyay sanadkii 1972-dii.
Xiddigaha kuwa kale ka soocan
Xiddiga Maxamed Cali Kalaay, feeryahankii caanka ahaa ayaa ah kan kaliya ee aanan lagu dul istaagi karin, taas badalkeedana waxaa lagu dhajiyay gidaarka dhismaha tiyaatarka Kodak. Xiddigan ayaa waxaa Maxamed Cali lagu sharfay sanadkii 2002-dii, wuxuuna sheegay in maadaamaa uu wato magaca Nabi Maxamed (scw) uusan ogoleyn in ay ku dul socdaan dad aanan xushmad u haynin isaga iyo nabigaba.
Halka jillaaga mala awaalka ah ee Mickey Mouse, ee aflaamka kaartoonka carruurta uu yahay kan kaliya een bini’aadamka ahayn ee xiddig halkaas loogu dhajiyay.
Qofka ugu caansan ee taariikhda aflaamta soo maray ee halkaas xiddig loogu dhajiyay ayaa lagu magacaabaa Marilyn Monroe oo ahayd atariisho.
Previous articleXildhibaan Siciid Cartan oo wasiirka hawlaha guud ku eedeeyay inuu luunsaday khayraadkii Gobolka Saaxil
Next articleMadaxweynihii hore ee DDSI oo la xaqiijiyay goobta uu ku suganyahay